पुष २६ गतेदेखि माघ ३ गतेसम्म तपाईको भाग्य कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस् – Hamrosandesh.com
पुष २६ गतेदेखि माघ ३ गतेसम्म तपाईको भाग्य कस्तो रहनेछ ? हेर्नुहोस्
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) ः समय राम्रो रहेकोले भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको प्रयोग गरी आम्दानी बढाउँन सकिनेछ । आफन्त तथा आमाको साथ पाइने हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । पढाइ लेखाइ तथा खोजमुलक काममा यात्रा गर्न सकिनेछ । प्रेममा रमाउन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ । समाजमा सबैलाई चित्त बुझ्दो काम गरी नाम कमाउन सकिनेछ । कृषि तथा शहकारी पेशा व्यवसाय गर्नेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ । कुनै पनि विवाद तथा प्रतिस्पर्धामा अरुभन्दा एक कदम अगाढि बढ्न सकिनेछ । शत्रु परास्त तथा पुरानो रोगबाट उन्मुक्ति पाईनेछ । नियम संगत गरेका काममा हुने फैसला तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । नोकरीमा बढुवा हुने योग रहेको छ । प्रेममा सामिप्यता बढ्ने तथा भेटघाटमा समय व्यतित हुनेछ । उपहारको रुपमा भौतक सम्पत्ति तथा सवारी साधन प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
वृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) ः साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले लगनशिलताको साथ गरिने कामको उच्च मुल्याङकन हुनेछ । दाजुभाई तथा छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्दै नयाँ कामहरु गर्न सकिनेछ । प्रतिस्पर्धीहरु सहयोगी बन्नेछन् भने कुनैपनि प्रतिस्पर्धामा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउँनेछ । अध्ययनमा मन जाने तथा अध्ययनकै सवालमा लामो दूरीको यात्राको तय गर्न सकिनेछ । घरायसी प्रयोजनका लागि भोग विलासका सामानहरुको खरिद गर्ने समय रहेको छ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । उपाहारका रुपमा विलाशी वस्तु हातलागि हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध सुदृड हुने तथा छुट्टिएका सम्बन्ध पुनः सुचारु हुने योग रहेकोछ । सोमबार दिउँसोबाट बुधबार बिहानसम्मको समय मध्यम रहेकोले आफ्नै भन्नेहरुले आश्वासन बाढ्ने तथा समयमा काम नगर्दिनाले समस्या पैदा हुनेछ । मन परेको मानिससँग टाढिनु पर्दा मन मुटुमा जलन पैदा हुनेछ । घरजग्गा तथा सवारी साधनको विषयमा विवाद गर्नुपर्ला । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन भन्दा आलोचना नै धेरै हुनेछ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) ः पारिवारिक जमघटमा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नुको साथै रमाईलो वातावरण समय व्यतित गर्न सकिनेछ । गायन तथा कलाकारिता क्षेत्रमा समय लगानी गर्नेहरुले नाम तथा दान दुवै कमाउँन सक्नेछन् । खेलकुद तथा आँट, शाहस तथा पराक्रमी क्रियाकलापमा भाग लिई नाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिनेछ । अदालतबाट हुने न्याय सम्पादन तपाईकै पक्षमा हुनेछ । लेखन, कला तथा साहित्यको क्षेत्र आजको दिन राम्रो रहेको छ । प्रेम सम्बन्धहरुमा आत्मियता थप प्रगाढ हुनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने व्यापारकै सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्रा हुनेछ । बुधबार साँझबाट समय मध्यम रहेकोले राजनीति तथा सामाजिक काम गर्दा ध्यान दिनुहोला । आलोचन गर्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । विरोधीहरुको सक्रियता बढ्ने हुदा काम गर्दा ध्यान दिनुहोला । भौतिक सम्पत्ति तथा सवारी साधनको कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला । अप्रिय घट्ना नहोला भन्न सकिन्न ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) ः नयाँ कामको अवसर आउने तथा गरिरहेको कामबाट मनग्ये धन आर्जन गर्न सकिनेछ । टाढिएका मित्र तथा आफन्तसँगको भेटले मन प्रशन्न हुनेछ । पुराना कमिकमजोरीहरुलाई सच्याउँदै रचनात्मक काम गर्न सकिनेछ । विलाशी वस्तुको प्रयोगमार्फत् अरुको ध्यान आकर्षित गर्न सकिनेछ । रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुर्ने तथा यात्राका क्रममा मिठो साथीभाईका साथमा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । बोलिको प्रभाव बढ्ने हुँदा बोलेकै भरमा कामहरु सम्पादन हुनेछन् । आफ्नै मेहनेतले व्यावसायमा फड्को मार्न सकिनेछ । लगनशिलताको साथ गरिने कामको उच्च मुल्याङकन हुनेछ । दाजुभाई तथा छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार गर्दै नयाँ कामहरु गर्न सकिनेछ । प्रतिस्पर्धीहरु सहयोगी बन्नेछन् भने कुनैपनि प्रतिस्पर्धामा तपाईको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । पढाइमा मन जानेछ भने पढाईकै सवालमा यात्रा गर्न सकिनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) ः बुधबार बिहानसम्मको समय मध्यम रहेकोले लगानी गर्दा ध्यान दिनुहोला । प्रतिफल पाउँन निकै समय खट्नु पर्नेछ । व्यापारमा लगानी गर्नको लागि केहि समय पर्खनुनै राम्रो रहेको छ । पढाइ लेखाइमा अलि बढी मेहनेतको खाँचो पर्ने देखिन्छ । अनावश्यक विवादले समस्या निम्त्याउँन सक्छ, ध्यान दिनुहोला । राजनीति तथा समाजसेवामा समर्थनभन्दा आलोचना बढी हुनेछ । नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला । समय मध्यम रहेको छ । भोग विलास तथा रमाईलो क्षेत्रमा खर्च बढ्नेछ भने स्वास्थ्यमा समस्या आउँनेछ । मनमा दोधार तथा निर्णय क्षमतामा कमि आउँनेछ । तरपनि विदेशी लगानिबाट सञ्चालित सस्थाबाट भने मनग्गे मुनाँफा कमाउँन सकिनेछ । विदेश यात्राको गतिलो योग रहेकोछ भने विदेशमा बसेर पेशा व्यवसाय गर्नेहरुका लागि समय फलदायी रहनेछ । बुधबार दिउँसोबाट समय राम्रो रहेकोले बोलीको प्रभाव बढ्ने हुनाले काउन्सेलिङ तथा मोटिभेसन क्षेत्रमा समय खर्चिनेहरुले मनग्ये धन आर्जन गर्न सक्नेछन् । स्रोत साधन जुट्नाले व्यवसायमा लगानी बढाउँन सकिनेछ । आफन्त तथा कुटुम्वबाट सुनिने सुखद समाचारले उत्साह जगाउँनेछ ।
कन्या (टो,पा,पी,पु,ष,ण,ठ,पे,पो) ः साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले व्यापारमा लागानी गरी मनग्ये धन आर्जन गर्न सकिनेछ । आर्थिक पक्ष मजबुत रहनेछ भने आर्थिक वृद्धिका लागि नयाँ अवसरहरु प्राप्त हुनेछन् । बिद्यार्थिहरुका लागि आजको समय उत्तम रहेकोले नतीजा आफैतिर ल्याउँन सकिनेछ । आफन्त तथा परिवारका साथ रमाइलो यात्रा गर्दै मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । प्रणय सम्बन्धमा सुधारको संकेत देखिनेछ । दैनिक समस्याहरु सुल्झाउँदै बढ्न सकिनेछ । सोमबार दिउँसोबाट बुधबार बिहानसम्मको समय मध्यम रहेकोले स्वास्थ्यमा समस्या आइ खर्च बढ्ने योग रहेकोछ । पढाइ लेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिनेछ । माया प्रेममा अबिश्वास बढ्ने तथा परिवारका अग्रज व्याक्तित्व सँग राय बाजिनेछ । तरपनि विदेशी सामानको व्यापार व्यावसायबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । लामो दुरिको बिदेश यात्राको योग रहेकोछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) ः उच्च तथा विशिष्ट व्यक्तित्वसँग मित्रता बढ्नेछ । विभिन्न अवसरको सदुपयोग गर्दै राम्रा तथा परिणाममुखी काम गर्न सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन पाइनाले पद प्राप्तीको योग रहेको छ । अध्ययनमा प्रतिस्र्पधीहरुलाई किनारा लगाउँदै उत्कृष्ट नतिजा हात पार्न सकिनेछ । प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गरी रचानात्मक कार्य गर्न सकिनेछ । पैत्रिक धनको प्रयोग मार्फत व्यवसाय गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिनेछ । प्रेममा सामिप्यता बढेर जानेछ भने जीवनसाथीको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । जमघटमा मिष्ठान्न भोजन ग्रहण गर्न सकिनेछ । बुधबार साँझबाट समय मध्यम रहेकोले खानपानमा ध्यान नदिए स्वास्थ्यमा समस्या आई खर्च बढ्नेछ । नियम संगत काम नगर्नाले दण्ड तथा जरिवाना तिुर्नुपर्ने हुन सक्छ, ध्यान दिनुहोला । तपाईको व्याहारले माया प्रेममा अविश्वास बढ्नेछ ।
वृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) ः साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले समयको महत्व बुझेर अगाडी बढ्दा चाहेको गन्तव्य भेट्न सकिनेछ । धर्म अध्यात्म तथा सामाजिक परम्परा जस्ता क्षेत्रमा मन जानेछ । खोजीमुलक काममा लामो दूरीको यात्राको तय गर्न सकिनेछ । व्यापार व्यवसायमा केहि मन्दि आएपनि दैनिकी प्रभावित हुनेछैन । प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको प्रयोगले आम्दानिमा वृद्धि गर्न सकिनेछ । शिक्षा तथा चेतनामुलक कामहरुबाट मनग्गे धन आर्जन गर्न सकिनेछ । अग्रज तथा बुवाबाट गाइडलाईन प्राप्त हुनाले अग्रगामी छलाङ मार्न सकिनेछ । परिवारका ईच्छा तथा आकांक्षाहरु पुरा गर्न सकिने हुनाले मन खुसी रहनेछ । सोमबार दिउँसोबाट बुधबार मध्यान्हसम्मको समय मध्यम रहेकोले कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा ध्यान दिनुहोला आलोचना गर्नेहरु सक्रिय हुनेछन् । सरकारी तथा प्रशासनिक काम गर्दा ध्यान दिनुहोला । सेवा प्रवाह गर्नेहरुले समयमा काम नगर्दिनाले महत्वपुर्ण अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्नेछ ।
धनु (ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) ः सोमबार बिहानसम्मको समय मध्यम रहेकोले संकट व्यवस्थापनमा चालिएका कदमहरु निअर्थक हुनेछन् । गोप्य योजनाहरु बाहिरिन सक्छ, ध्यान दिनुहोला । आफन्त तथा दिदिबहिनीहरुले पनि सहयोग गर्ने छैनन् । सोमबार दिउँसोबाट बौद्धिक, प्राज्ञिक तथा सिर्जनात्मक कामबाट भनेजस्तो नतिजा हात पार्न सकिनेछ । धर्म तथा अध्यात्म क्षेत्रमा विशेष रुचि बढ्नेछ । दार्शनिक विषयवस्तुमा मन जाने हुनाले फराकिलो ज्ञान आर्जन गर्न सकिनेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जाने हुनाले प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । दाम्पत्य सुख, प्रेमसम्बन्ध तथा पारिवारिक सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ । तारिफयोग्य काम गरी नाम तथा दाम दुवै कमाउँन सकिनेछ । राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको समर्थन पाईने हुँनाले पद प्राप्तीको योग रहेको छ । पैत्रिक स्रोत साधनको प्रयोगमार्फत् आम्दानी बढाउँन सकिनेछ भने कृषि पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । नयाँ काम पाउँने तथा नोकरीमा बढोत्तरीको गतिलो योग रहेको छ । प्रेमील जोडीहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) ः भौतिक वस्तु तथा सवारी साधनको कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला समय मध्यम रहेको छ । आफन्त तथा साथीभाईसँग मनमुटाव सिर्जना हुने योग रहेको छ । व्यापारमा लगान गरिहाल्ने समय नरहेकोले गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिनुहोला । माया प्रेममा एक अर्कालाई शंका गर्नाले छुट्टिनुपर्ने बाध्यता आउँनेछ । खानपानमा ध्यान दिनुहोला, स्वास्थ्यमा समस्या आउँनेछ । बुधबार साँझबाट समय राम्रो रहेकोले समाज तथा समुदायको हितमा काम गर्न सकिने हुँदा ईज्जत प्रतिष्ठामा वृद्धि भएर जानेछ । खोजिमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा भनेजस्तो सफलता हात पार्न सकिनेछ । प्रेममा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समय उत्तम रहेको छ । पढाइ लेखाइकै सन्द्रर्भमा लामो र्दूरीको यात्रा हुनेछ । धार्मिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रमा समय लगानी गरी अरुको सेवा गर्ने अवसर जुर्नेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) ः व्यापारको सिलसिलामा लामो दूरीको यात्राको अधिक सम्भावना रहेको छ भने व्यवसायमा लगानी गरी प्रशस्त नाफा कमाउन सकिनेछ । अध्ययन, लेखन, कलासाहित्य तथा गीत संगीतमा चासो बढ्नेछ भने तपाईको प्रतिभाको उच्च कदर हुनेछ । प्रेम सम्बन्ध विश्वासको वातावरण बढ्नेछ । भौतिक साधनहरु जुट्नेछन् प्रविधिको प्रयोग मार्फत मनग्ये धन आर्जन गर्न सकिनेछ । न्यायालयबाट हुने न्यायिक निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । बुधबार साझँबाट समय मध्यम रहेकोले खानपान तथा मौसमको ध्यान दिनुहोला स्वास्थ्यमा समस्या आई औषधी उपचार खर्च बढ्नेछ । धेरै समय दिएमात्र व्यापार व्यवसायमा आम्दानी गर्न सकिनेछ । सामाजिक काममा समय दिन नसकिने हुनाले जिम्मेवारी बहन नगर्नु नै ठिक हुनेछ । अध्ययनमा मन नजानाले नतिजा अरुकै पोल्टोमा पर्नेछ । प्रेममा धोका हुनेछ । भौतिक सम्पत्ति प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुहोला ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची्र) ः साताको सुरु र अन्तको समय राम्रो रहेकोले राम्रा काम गरी अरुको विस्वास जित्न सकिनेछ । धैर्यधारण गरी काम गर्नाले कामहरु समयमा नै सम्पन्न हुनेछन् । नयाँ प्रविधीको प्रयोगमार्फत् आम्दानीका स्रोतहरु बढाउँन सकिनेछ । प्रतिस्पर्धामा प्रतिस्पर्धीहरुलाई किनार लगाउँदै विजय भइनेछ । स्कुल, कलेज, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी अथवा त्योसँग सम्बन्धित कामहरुबाट सन्तुष्टि हुन सकिनेछ । व्यापारमा स्रोत साधन जुट्नाले प्रशस्त आम्दानी हुनेछ । व्यवसाय विस्तारकै सवालमा यात्रा हुनेछ । माया प्रेममा सामिप्यता बढेर जाने तथा जीवनसाथीको सहयोगले राम्रा काम गर्न सकिनेछ । सोमबार दिउँसोबाट बुधबार बिहानसम्मको समय मध्यम रहेकोले पुराना रोग पुनः बल्झिनाले स्वास्थ्यमा समस्या आउँनसक्छ । अदालती निर्णयहरु तपाईको पक्षमा आउँने छैनन् । प्रणय सम्बन्धमा सामान्य शंकाले केहि समयको लागि टाढिनु पर्ने बाध्यता आउँनेछ । आफन्त, मामा तथा मावली पक्षसँग राय बाजिनेछ ।